Qeexitaanka iyo noocyada sumadda | Abuurista khadka tooska ah
Summad Waa shaabadda lagu kala saaro hal shirkad iyo shirkad kale, waa midka tilmaamaya adeegga la bixinayo ama sheyga la iibinayo, macaamilka kani waa midka dejiya dookhyadooda markay tahay iibso alaabta macaamiisha guud ahaan.
Qiimaha astaanta, tan lafteedu waxay hore u leedahay aqoonsi u gaar ah, wuxuu gudbiyaa farriin, wuxuu soo dhoweeyaa macaamilka, wuxuu siiyaa af furan oo ku saabsan waxa uu matalayo, wuxuu siiyaa xaalad, wuxuu soo jeediyaa tayo, sharaf, mood, iwm. waana taas sawirka summad wanaagsan ayaa qiimo leh kun eray.
Laakiin fikradani waxay leedahay taariikhdeeda iyo gudaheeda isbeddelkeeda dabiiciga ah, markii ugu horreysay astaanta ayaa loo adeegsaday siinta aqoonsiga juqraafiyeed alaabada, taas oo muujineysa tayadeeda ama aan ku xirneyn asalkeeda, aqoonsigan waxaa lagu sameeyay weelasha dhoobada ka hor inta aan la toogan si goobta asalka ah loogu dul daabaco, iyadoo qaadaneysa qiimaheeda aqoonsiga qiyaastii qarnigii XNUMX-aad.
Goor dambe, xilligii loogu yeeri jiray qarniyadii dhexe, ayaa magacyada wadajirka ah halkaas oo qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay geedi socodkeeda wax soo saar lagu aqoonsaday sheyga taasna loo dhigay a shaabad dammaanad tan, tusaale aan ka helnay soo saarista dharka halkaas oo gabalku ku dhasho mid kasta oo ka mid ah astaamaha gacan ka geystay soo saariddeeda, tolade, dye, iwm.
Qarnigii XNUMXaad, macaamiisha ayaa bilaabay summad la wadaag shey Si looga garto iyaga iyo kuwa la midka ah, ka dib markii ay bateen sumadaha iyo alaabada macaamiisha ayaa lagama maarmaan ka dhigtay sameynta ururadan.
The kacdoonka warshadaha Iyada oo ay la socoto astaanta ayaa soo saareysa dabeecad cusub oo aad u xeel dheer halka muuqaalka baakadaha iyo walxaha garaafka ah ee iyaga ku jira ay fududeeyeen in lagu kala sooco mid ka mid ah alaabada kale, shaqeynta kaliya sheyga, laakiin sidoo kale muuqaalka iyo iyada oo leh soo galay ciyaar faa'iidooyinkiisa, waxaana qiime la siiyay curiyeyaal kale marka laga reebo tayada sheyga laftiisa.
Farsamadan kala soocista iyo aqoonsiga ee lagu gaadhay sumadda, ayaa ku sii fiday magac shirkadeed badeecooyinkooda iyo adeegyadoodu aad u ballaadhan yihiin, way wada noqon karaan ama iskuma xidhmi karaan laakiin waxay ku jiraan sawir, astaan, magac, iwm.
Shirkad ayaa awooda sameysato astaan ​​kuu gaar ah una adeegso dantaada iyo sida aad ugu habboon tahay, kuwani waa qaar ka mid ah siyaabaha ay sida caadiga ah u adeegsadaan:
1 Summad gaar ah
2 Summad shaqsiyeed
3 Summad isku dhafan
4 Sumadda qaybinta
Waxay ka kooban tahay mid kasta oo ka mid ah alaabooyinka iyo adeegyada shirkad, markuu adeegsaduhu fiiriyo sawirka isla markiiba wuxuu la wadaajiyaa waxa ay shirkaddu iibiso, tusaale ahaan, kaliya alaabada kumbuyuutarka, kaliya alaabada iyo adeegyada xayawaanka, iwm.
Waxaa jira shirkado waaweyn oo si fudud loo aqoonsan karo iyadoo la fiirinayo astaantooda, sida IBM iyo HP.
Markay ku dhexjirto nooc weyn, waxaa lagu siinayaa a aqoonsi madaxbanaan mid kasta oo ka mid ah alaabteeda, taasi waa wax caadi ah in lagu arko kuwa P&G.
Summad isku dhafan
Waa a isku dhaf ah hal nooc iyo astaan ​​shaqsiyeed. Waxaa jira tusaalooyin aad u qaas ah oo ku saabsan warshadaha gawaarida, macaamilku wuxuu horeyba ula midoobayaa moodooyinka gawaarida ay doorteen calaamadda, tusaale ahaan, Jeep Cherokee, Chevrolet Cruze, Ford Explorer iyo wixii la mid ah.
Kuwani waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado wax soo saarka iyo adeegyada calaamadda cidda u suuqgeyneysa, iyagana waa loo yaqaan calaamadaha cad waxayna ka tirsan yihiin shabakadaha baahinta ballaaran ee ku takhasusay iibinta wax soo saarka.
Kuwa leh ganacsiyada yaryar ama raba inay abuuraan midkood, macluumaadkan ayaa faa'iido badan u leh cadee nooca summad ee aad leedahay iyo hadday tahay midda ku habboon ama nooca summaddee ah ee aad naqshadayso iyadoo ku saleysan alaabada iyo adeegyada aad u fidinayso dadka isticmaala. Waxay sidoo kale waxtar u yeelan doontaa macaamiisha maxaa yeelay hadda waxyaabo badan ayaa lagu sharaxay noocyada aan u maleynay inaan si buuxda uga warqabnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Qeexid iyo noocyada sumadda